जनकपुरमा बम आतंक , कसले मचाउँदै छ यो आतंक ? – Shirish News
जनकपुरमा बम आतंक , कसले मचाउँदै छ यो आतंक ?
जनकपुर ३०गते मंसीर
केहि दिन देखि प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा पुःन अशान्ती र त्रास पैदा गर्ने प्रयास भईरहेको देखिएको छ ।
पछिल्लो केहि वर्ष देखि शान्त रहेको मधेसमा अहिले केहि समय देखि शान्ती भंग गर्ने व्यापक प्रयास भइरहेको छ । सेलाएको अपराधी समूहहरु पुःन जुरमुराउन थालेको देखिन्छ । महिना दिनयता प्रदेश–२ अशान्त छ। श्रृंखलाबद्ध बम बिस्फोटका घटनाहरु भएको छ ।
कहीँकतै प्रतिबन्धित विप्लव समूहले बम राखेको प्रहरीको भनाइ छ भने कतै अपराधी समूहले चन्दा संकलन गर्न बम आतंक मचाएको छ ।
अहिले केहि समय देखि सरकारी कार्यालय, उद्योगी व्यापारीको घर, सार्वजनिक स्थलमा टाइम बम, प्रेसर कुकर र सकेट बम राख्ने अनि बिस्फोट गराउने समूह सक्रिय देखिएका छन्।
शुक्रवार धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ महेन्द्रनगरमा राजेश साहको घरमा कसैले राखेको बम मध्यराती विस्फोट हुँदा घर राजेश साह निजको छोरा आनन्द साह र अनुसन्धानको लागि पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्चार्ज प्रहरी निरिक्षक अमिर दाहाल सहित ३ जनाको मृत्यु भयो र एक प्रहरी जवान सहित ४ जना गम्भिर घाईते भए ।
यो घटना सेलाउन नपाउँदै जनकपुरको दुई ठाउँमा कुकर बम जस्तै देखिने शंकास्पद वस्तु फेला पर्यो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ९ संकटमोचन मन्दिरदेखि पश्चिम बागवानी जाने बाटोको छेउमा कुकर बम जस्तै देखिने शंकास्पद वस्तु आईतवार राति ९ बजे फेला प¥यो भने सोमवार विहान ८ बजे तिर जनकपुर ९ को नै सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालय नजिकै फेरि अर्को शंकास्पद वस्तु फेला परेको थियो।
त्यसैगरी आज नै धनुषाधाम नगरपालिका–५ पर्वता स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयमा समेत शंकास्पद वस्तु फेला प¥यो । विद्यालयमा शंकास्पद वस्तु फेलापरेपछि विद्यार्थीमा त्रसित भए । विद्यालयको पढनपाठन बन्द रह्यो ।
विद्यालयको लेखा शाखाको झयालमा सेता प्लास्टिकमा राखिएको वस्तु वम हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले विद्यालय खाली गराए र बम डिस्पोजल टोली मगाईयो ।
अन्तत्वगोत्वा तीनै ठाउँमा राखिएको शंकास्पद वस्तु बम नरहेको थाह भयो । तर आज दिन भर जनकपुर क्षेत्र बम आतंकले त्रासमा रह्यो ।
जनकपुर स्थित बागवानीबाट संकटमोचन मन्दिर जाने बाटोमा बम नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको छ भने अर्को ठाउँमा राखिएको शंकास्पद वस्तु बम नरहेको पुष्टि भयो ।
पर्वता माविमा फेला परेको शंकास्पद वस्तु झोलामा पनि नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले फोहोर मैलाको थैला मात्र रहेको बताए ।
स्थानीयहरुमा त्रास फैलाउनको लागि सुनुयोजित तरिकाले विद्यालयको लेखाशाखको झ्यालमा फोहोरको थैला राखेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । श्रीनाथ गणका नेपाली सेनाका क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र जैसीले भने, ‘विद्यार्थीहरुमा समेत त्रास फैलाउन कै लागि सुनुयोजित ढँगले त्यो थैला राखेको हो । फोहोरको थैला विद्यालयमा किन कोही राख्छन् र ? त्यो पनि लेखा शाखाकै झ्यालमै गएर ? त्यो त जहाँ पनि फाल्न सक्छ नी ? यो त्रास फैलाउने योजना मात्र थियो ।’
नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले फेटिएका शंकास्पद बस्तुहरु बम नरहेको प्रमाणित गरे पनि यस क्षेत्रमा त्रास भने अझै कायमै रहेको छ ।
आज तीन ठाउँमा शंकास्पद वस्तु देखियो र त्यसले आमजनतामा एक किसिमको भय त्रासको वातावरण सृजना भयो । तर मंसिर दोस्रो साता यता मात्र हेर्ने हो भने धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा,रौतहट लगायतका जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरुमा बम राखिएको भेटियो।
मंसिर २८ गते सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका कार्यालयमा पनि बम बिस्फोट भयो । कार्यालयको माथिल्लो कोठामा अज्ञात समूहले राखेको बम विस्फोट हुँदा झ्याल र ढोकामा क्षति पुग्यो। बम बिस्फोटको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राय ग¥यो।
मंसिर १३ गते सिराहा कै धनगढीमाई नगरपालिकाको कार्यालयको ढोकाअघि शंकास्पद झोला फेला प¥यो । उक्त शंकास्पद बस्तुको झोला नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीको कार्यकक्ष रहेको भवनको मूलढोका मै राखिएको थियो र त्यो झोलामा बम थियो। नेपाली सेनाको टोलीले त्यस बमलाई डिस्पोज गरे।
मंसिर २३ गते महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर स्थित वन डिभिजन कार्यालयमा अज्ञात व्यक्ति वा समूहले प्रेसर कुकर बम राखेको पाईयो । कार्यालयको प्रांगणमा पार्किङ गरिएको गाडीको मुनि उक्त बम राखिएको थियो। नेपाली सेनाको टोलीले उक्त बम डिस्पोज ग¥यो।
मंसिर १२ गते महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको उप निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार विक्रम चौधरीको घरमा प्रेसर कुकर बम बिस्फोट भयो।
मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि बम बिस्फोट गराएको पाईयो । मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा मतदातालाई त्रसित बनाउन सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका १ को उपनिर्वाचनका लागि तोकिएको मतदान केन्द्र नजिकै बम राखिएको पाइयो। पछि नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज ग¥यो।
कात्तिक २६ गते रौतहटको इसनाथ नगरपालिका ४ स्थित मठिया प्रहरी चौकीमा २६ अज्ञात समूहले बम फालेर भागे। बिस्फोटमा एक प्रहरी जवानलाई बमको छर्रा लागेर घाइते भए।
बम पडकाएर चन्दा उठाउने गिरोह पक्राउ
मंसिर २६ गते बम बिस्फोट गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसाएर धम्क्याएर चन्दा असुली गर्ने एक गिरोह प्रहरीलाई बारा जिल्ला प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।
नेपाल–भारतको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई आतंकित पारेर बम बिस्फोट र चन्दा असुली लगायतको आपराधिक कार्यमा संलग्न परवानीपुर गाउँपालिका ४ का ३१ वर्षीय प्रमोद साह गोढ, २० वर्षीय देवशंकर राम, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका २० का २० वर्षीय अच्चेलाल गोसाइँ र फेटा गाउँपालिका ३ का ३९ वर्षीय दीपेन्द्रकुमार धानुकलाई पक्राउ गरियो ।
बाराका प्रहरी उपरीक्षक विकासराज खनालले पक्राउ पर्नेहरु गोढ गिरोह संचालन गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार परवानीपुर गाउँपालिका ४ स्थित एमएस इँट्टा उद्योगका सञ्चालक मनोजप्रसाद साह तेलीसँग फिरौती रकम लिने क्रममा पक्राउ परेको हो । तिनिहरुले तीन महिनादेखि इँट्टा उद्योगका सञ्चालक साहलाई धम्क्याउँदै १५ लाख रकमको चन्दा माग गर्दै आएका थिए। चन्दा नदिएर साहले धम्कीबारे प्रहरीमा जानकारी गराएपछि गोढ सहित गिरोह पक्राउ परे ।
प्रहरी उपरीक्षक खनालले भने, ‘तीन महिनादेखि फोन र एसएमएस मार्फत साहुलाई धम्क्याउने र बम बिस्फोट गरेर रकम माग गर्दै आएको सूचना प्राप्त भयो, चन्दा दिने भनेर बोलाएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भयौं।’
तिनिहरुले चन्दा नदिएपछि कात्तिक ४ गते तेलीको उद्योगमा बम समेत बिस्फोट गराएका थिए । बिस्फोटपछि पनि चन्दा नदिए परिवारलाई समेत सिध्याइ दिने धम्की दिएपछि साह प्रहरी समक्ष पुगेका थिए ।
प्रहरी उपरीक्षक खनालले गोढ तीन वर्षअघि हातहतियार मुद्दामा डेढ वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति भएको बताए ।
प्रहरी उपरीक्षक खनालले भने, ‘असोज १० गते प्रसौनी ४ का नन्दकिशोर प्रसाद कुम्हालसँग गोढ सहितका व्यक्तिले ५० लाख फिरौती मागेको र रकम नपाएपछि सुतली बम बिस्फोट गराए। परवानीपुर ४ स्थित नारायणी आयल रिफायनरीमा सुतली बम बिस्फोट गरी २५ हजार फिरौती रकम लिए ।’
सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त छ, आत्तिन र डराउन पर्दैन ः डीआईजी कार्की
प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले प्रदेश २ को सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेको बताए ।
डीआईजी कार्कीले शान्ति सुरक्षाको लागि प्रहरी चौबिसै घन्टा तयार रहेको बताउँदै उनले सर्वसाधारण लाई आग्रह गरे, ‘कोही पनि आत्तिन डराउन पर्दैन, प्रहरी हरपल शान्ति सुरक्षाको लागि खटिन तयार छ ।’
उनले प्रहरीले बम बिस्फोटसँग सम्बन्धित घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।
कार्कीले प्रदेश २ मा कुनै बम आतंक नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘महेन्द्रनगरमा बम विस्फोट भएर मानवीय क्षति भएको हुँदा केहि डर त्रासको वातावरण सृजना भएको होे ।’
कार्कीले भने, ‘चन्दा उठाउने समूहले बम राख्ने र पड्काउने गरेको छ। गैरराजनीतिक समूहले डराउन बम बिस्फोट गराएर चन्दा असुली गर्ने गरेको छ, उनीहरू अपराधी समूह हुन्।’ उनले कुनै कुनै ठाउँमा विप्लव समूहले पनि बम राख्ने र पड्काउने गरेको बताए। यद्यपी यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई जसरी पनि कानुनी दायरामा ल्याउने डीआईजी कार्कीले बताए ।
महेन्द्रनगर बम विस्फोटको पछाडि लेनदेन विवाद नै मुख्य कारण, ४६ लाख बराबरको कागज भेटियो !